SAUR အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ် SA V ကို. အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံ (ICSID ပြဿနာ NO. ARB / 04/4)
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့် / SAUR အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုပ် SA V ကို. အာဂျင်တီးနားသမ္မတနိုင်ငံ (ICSID ပြဿနာ NO. ARB / 04/4)
ဤကိစ္စတွင်အတွက်တောင်းဆိုသူ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့သည် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသ Society ၏, S.A., ရေထုတ်လုပ်မှုအထူးပြု, ရေကုသမှု, ရေဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး.
အဆိုပါတောင်းဆိုသူပါဝင်ခဲ့နှင့်အာဂျင်တီးနားကုမ္ပဏီ Obras Sanitarias Mendoza ကိုပုဂ္ဂလိကပိုင် Mendoza ၏ပြည်နယ်ကလေလံအနိုင်ရခဲ့ဖူး ("OSM"). OSM နှင့်ပြည်နယ်ထို့နောက် OSM drinkable ရေများအတွက်အများပိုင် service provider ကများနှင့်အပ်ချုပ်သူစနစ်များ၏ယိုစီးမှု၏အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါအံ့တစ်ဦးလိုက်လျောသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုး. အဆိုပါတောင်းဆိုသူထို့နောက်ဝယ်ယူ 12,08% OSM နှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့. သို့သျောလညျး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း၏ 2002, OSM သိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့နှင့်ရေများ၏စျေးနှုန်းတိုးမေတ္တာရပ်ခံ. အဆိုပါလိုက်လျောစာချုပ်နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုစာချုပ်နှစ်ခုလုံးကိုမှန်ကန်စွာအစောပိုင်းနှစ်တာကာလအတွင်းကွပ်မျက်ခံရခဲ့ပေမယ့်, အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းများ 2002 သူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်. သိသာထင်ရှားသောဆုံးရှုံးမှုခံစားနေရပြီးနောက်, OSM ရေ၏စျေးနှုန်းကြီးပြင်းစေခြင်းမေတ္တာရပ်ခံ.
အဆိုပါတောင်းဆိုသူများတွင်အနုညာတစီရင်၎င်း၏တောင်းဆိုမှုတင်သွင်း 2003 နှင့်, အပေါ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အပေါ်တစ်ဦးအာဏာရအပြီး 27 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2006, အဆိုပါပါတီများအဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုရပ်ဆိုင်းရန်ဖို့သဘောတူ, အဆိုပါလိုက်လျောစာချုပ်ထဲမှာဖျက်သိမ်းသောအခါပေမယ့်ခုံသမာဓိ recommenced 2010 နှင့် Aysam အမည်ရှိအသစ်တခုပြည်နယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီလွှဲပြောင်း.
အဆိုပါ ICSID ခုံရုံးအဆိုပါတောင်းဆိုသူ၏မျက်နှာသာအတွက်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ဖြေဆိုသူတရားမျှတပြီးသာတူညီမျှကုသမှုချိုးဖောက်နှင့်တောင်းဆိုသူရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသိမျးခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ.
လျော်ကြေးပမာဏကိုမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, အဆိုပါတောင်းဆိုသူက OSM ၏ရှယ်ယာများအတွက်ဖန်ဆင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းပံ့ပိုးမှုစာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အခွင့်အရေးများအတွက်တန်ဖိုးညီမျှဖြစ်သင့်ကြောင်းစောဒကတက်. အဆိုပါခုံရုံးရှယ်ယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်များအတွက်တောင်းဆိုသူရဲ့ကျွမ်းကျင်သူရဲ့နည်းစနစ်နှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့ပေမယ့်တောင်းဆိုသူလည်းအာဂျင်တီးနားအတွက်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုမိတ်ဆက်ခဲ့သောအဖြစ်ကြောင့်တူညီတဲ့ပြစ်မှုအတွက်နှစ်ဆနစ်နာကြေးတစ်အန္တရာယ်ပမာဏကိုလျှော့ချ. အဆိုပါခုံရုံးအရှင် OSM ၏ရှယ်ယာများအတွက်တောင်းဆိုသူရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးသည်အမေရိကန်ခဲ့ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည် $20,643,021.
နည်းပညာဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုကိုစာချုပ်ထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်, အဆိုပါတောင်းဆိုသူကျိုးကြောင်းဆီလျော်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရမည်ကိုမျှော်လင့်နိုင်သောကြောင့်,, အဆိုပါတောင်းဆိုသူလက်ခံရရှိရန်ရည်မှန်းခဲ့သည်ဝင်ငွေ၏တန်ဖိုးစာချုပ်များ၏ရပ်စဲအမေရိကန်စောဒနာမှရှာတွေ့ခဲ့သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘူး $19,347,090.
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အာဂျင်တီးနားအနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်